English songs nakwa dị ka ihe nkiri na-enwe ekele na-ele n'ụwa nile na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọrụ na nke a kwesịrị ime ka n'aka na lyrics na-abụghị nanị ghọtara ma onye ọrụ na-ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe nkwụnye na nke a na-eme ka n'aka na needful na-eme. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nkwụnye na arụnyere bụ onye na-abụghị nanị na-ezukọ na mkpa na-achọ n'aka ndị mmadụ ma na-na-na ọrụ mere n'ime bụghị oge. A nkuzi bụ ihe niile banyere lyrics ikwunye-na na ike-arụnyere windows media ọkpụkpọ.
Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na ikwu na lyrics ikwunye-na ndepụta na nkebi nke a bụ-mere dị ka jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma mere n'ime oge ọ bụla na niile na na needful bụkwa na ike mere na enyemaka nke ndị a mgbe ọ na-abịa na-agụ lyrics. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịkwara ime ka n'aka na nkwụnye na kwuru ebe a na-arụnyere si URL na e kwuru ka ọ bụ ihe ndị kasị mkpa nke ihe nile ugboro na ya mere ọ bụkwa na-kwuru na nkwụnye na na e kwuru
Ebe a bụ ndị na-abụghị nanị na-emelitere site onwe ha kamakwa jide n'aka na arụmọrụ nke nkwụnye na mgbe mie ala. Ọ bụ ya mere ka-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ịgbaso ndepụta na-ọrụ mere na ụdị na enweghị ihe ọ bụla mgbochi dị ka ọ ga-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na akụkụ ikpeazụ nke ndị nkuzi ga-enyocha pụtara nke lyrics ikwunye-na ọbụna miri:
1. Lyrics Ikwunye-na
Ọ bụ nnọọ ihe kasị nkịtị na ọkaibe omume na ike-ebudatara iji jide n'aka na needful a mere enweghị ihe ọ bụla nke na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi na ikwu na lyrics na-egwuri. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọrụ na nke a mmekọrita kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe omume na-ibudatara na URL http://www.lyricsplugin.com/ dị ka ọ bụ ukara website na mmepe nke nkwụnye na na-aha dị ka otu ihe ahụ. Foto nke nkwụnye na e sere dị ka ndị a:
2. Obere Lyrics
Ọ bụkwa otu nke kasị mma na ọkaibe omume na ike-ebudatara iji jide n'aka na onye ọrụ bụghị nanị na-ahụ lyrics na ihuenyo ma na arụmọrụ nwekwara ike enwekwukwa iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na nke Steti nke nkà results na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma e arụnyere mgbe ukara Crinsoft njikọ nke e kwuru n'elu na-soro na-needful mere na ịke. Nke a lyric nkwụnye nwekwara ike arụnyere na ngwaọrụ mkpanaaka dị ka e nwere obere version dị ka mma.
3. Lyrics achọ
Ọ bụkwa otu n'ime omume na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe featuee arụnyere n'efu dị ka lyrics ikwunye-na bụ nnọọ free nke na-eri na onye ọrụ kwesịrị ịkwụ ụgwọ ihe ọ bụla maka echichi dị ka nke ọma . Na nke kacha mma mere ọ na-gwara-eso njikọ nke e kwuru n'elu na-eme ka n'aka na ihe omume a na ibudatara na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na kpaliri na-soro na-needful mere.
Ọzọ ọgbọ software
Ọ bụkwa otu n'ime omume ndị na-nwere ọtụtụ atụmatụ agbakwunyere n'ime ya na ya mere ọ dị mkpa iburu n'obi na ndị a niile atụmatụ-eme kwupụta n'ozuzu amara na Wellness nke lyrics ikwunye-na na e agbakwunyere iji jide n'aka na ihe kasị mma na ọkaibe ọrụ na-abụghị nanị nyere ma onye ọrụ na-ọkọkpọhi needful mere na-enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịkwara ime ka n'aka na nkwụnye na arụnyere mgbe firewall e nwere nkwarụ.
5. Isiokwu lyrics nkwụnye
Mmepe nke a nkwụnye mere ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma nakwa ọkọkpọhi needful mere na ịke. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe omume na e mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye-arụ ọrụ mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nkwụnye na na-na-eji na Nchikota na windows dị ka ọ bụ naanị windows isi na mwekota na ndị ọzọ na nyiwe dịkwa n'okpuru ụzọ iji hụ na onye ọrụ na-akawanye-arụ ọrụ mere enweghị ihe ọ bụla nke ma ha bụ adịghị ma na-ga-mepụtara anya.
The lyrics ikwunye-na nwere ike ime ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọrụ mere na ụdị na pụrụ ịbụ nnọọ kemfe ọ bụrụ na ha na-arụnyere na nri n'ụzọ na ndị na-atụ aro na-nyere mkpa ma ọ bụrụ na o nwere bụghị e mere mgbe ahụ onye ọrụ agaghị enwe ike inwe zuru atụmatụ arụmọrụ dị ka ọ bụ ihe na-e ike ọ bụla lyric nkwụnye na na e kwuru okwu ya na ndepụta n'elu. Onye ọrụ na-mkpa ijide n'aka na functionalities na-anwale juputara na ọ bụrụ na nke na nke a mgbe ahụ onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị ọzọ nkwụnye na arụnyere dị ka nhọrọ ukwuu n'ihi na a sinlge ọrụ.
Olee otú Idozi Windows Registry Njehie Mfe
> Resource> Windows> Top 5 lyrics ikwunye-na n'ihi na windo mgbasa ozi ọkpụkpọ